Malunga nathi -Hangzhou LIAO Technology Co., Ltd.
Ibhayisekile ＆ Isithuthuthu kunye nesithuthuthu
Amandla okubuyisela umva
Inkqubo yomoya yelanga
Inkqubo yokugcina amandla ekhaya
IUPS (uNikezelo lwaMandla olungenakuphazanyiswa)
Isikhululo sesiseko soNxibelelwano
Inkqubo yokubeka iliso kwi-Intanethi
Yasekwa ngonyaka ka-2009, i-Hangzhou LIAO Technology Co., Ltd.ngumenzi oqeqeshiweyo kunye nohola phambili kwi-LiFePO4iibhetri. Iimveliso zethu zithunyelwa kumazwe angaphezu kwama-20 kwihlabathi liphela.
Sele simisele inkqubo yeQC engqongqo nesebenzayo. Zonke iimveliso zethu ziveliswa ngokungqongqo phantsi kwenkqubo yolawulo lomgangatho ye-ISO 9001. Ngeli xesha, sidlulile kwaye sihlala sigcina ukuthotyelwa kwenkqubo yolawulo lokusingqongileyo i-ISO 14001 kunye nenkqubo yolawulo yempilo nokhuseleko ye-ISO 18001.
Inkonzo ebalaseleyo kunye nomgangatho othembekileyo usinceda ukuba siphumelele igama lehlabathi, umzekelo:
Jemani, France, Netherlands, Spain, United Kingdom…
I-USA, Canada, Mexico, neBrazil…
Australia, Philippines, Thailand, Singapho…
Mzantsi Afrika, Nigeria…
+ Ulawulo oluSebenzayo + neQela lobuGcisa, elikwaziyo ukuphendula kwiimfuno zabo nabathengi ngexesha.
Itekhnoloji engundoqo, Inkqubo ye-R & D ngokupheleleyo, ekwaziyo ukwenza izisombululo kwiimfuno zabathengi.
Ulawulo lweMveliso yoBuchule kunye nabasebenzi abanezakhono, ulawulo olupheleleyo lomgangatho oqinisekileyo. I-OEM kunye ne-ODM yamkelwe.
Iqela lokuthengisa elinamava kunye nelobungcali. Banyanisekile, bayawuthobela umthetho, bayasebenzisana, banoxanduva kwaye bangoovulindlela. Banobuchule bokuthengisa, ubuchule bothethathethwano lweshishini, ubuchule bokuqhubekeka kwembalelwano, amandla okusebenza kweshishini, amandla okuphatha ngokubanzi, izakhono zokunxibelelana, kunye namandla okufunda aqhubekayo. Baziqhelanisa nezakhono zesiNgesi, ulwazi ngemveliso, ulwazi lwentengiso lwamanye amazwe, iindlela zorhwebo zamanye amazwe, imithetho nemigaqo-nkqubo yorhwebo lwangaphandle, kunye neendlela zokuziphatha zeshishini langaphandle.
I-LIAO R & D kunye nokuveliswa kweebhetri ze-lithium iron phosphate, ngokhuseleko, ukhuselo lokusingqongileyo, ubomi obude, amandla amakhulu, ubungakanani obuncinci, ubunzima bokukhanya, ukusebenza ngokugqwesileyo, kwaye ngokweemfuno zokwenyani zezicelo, ezilungiselelwe iimodeli ezahlukeneyo zendalo iibhetri ezinobungane, iinkonzo ezinyanisekileyo ezikhathalayo kubathengi basekhaya nakwamanye amazwe.
Wamkelekile ukuba basebenzisane nathi yi-OEM kunye ne-ODM
Iya kuthakazelelwa kakhulu into yokuba ukuba unokunxibelelana nathi ngolwazi oluthe kratya malunga nenkampani kunye neemveliso zethu.
Inombolo ye-15 Yangcheng, Pingyao, Yuhang, Hangzhou, Zhejiang, 311115, China
I-SNS kunye neMiboniso ekwi-Intanethi
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso zethu okanye isisombululo esenziwe ngokwezifiso, nceda ushiye imeyile yakho kuthi kwaye siya kuba kwebala zingadlulanga iiyure eziyi-24.